यो हो बलिउडकी नायिका आलिया भट्टलाई मनपर्ने सेक्स आसन ! | Liveekhabar, News Portal website, Nepal No.1 News Portal website, Onlince News Portal website
बलिउड स्टारहरु अक्सर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा त्यति धेरै खुलस्त हुँदैनन् । र सम्भव भएसम्म व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका विषयमा गुपचुप नै राख्न मनपराउँछन् । अझै कसैसँग प्रेमसम्बन्धमा छन् भने त झनै खुल्दैनन् । उसलाई केवल साथीका रुपमा चिनाउँछन् । यधपि, नयाँ पुस्ताका कलाकारहरु यो पराम्परालाई तोड्दैछन् ।
उनीहरु आफ्नो निजी जीवनका बारेमा पनि खुलेर कुरा गर्छन् । जस मध्य एक हुन अहिलेकी चर्चित नायिका आलिया भट्ट। बलिउड इन्डष्ट्रीमा छोटो र कम उमेरमा सफल हुने भाग्यशाली कलाकार हुने आलिया भट्ट र उनको व्यक्तिगत जीवन पनि एकदमै विन्दास छ ।
अन्तर्वार्तामा आलियाले आफ्नो बेडरूमसँग जोडिएका कतिपय गोप्य कुरा पनि खुलस्त रुपमा शेयर गरिन । आलियाले पुरुषप्रति आफ्नो धारणा पनि उक्त अवसरमा बताइन । पृथ्वीमा सबै परेर एउटा ५० वर्षका र अर्को १८ वर्षको दुईजना पुरुष मात्रै बाँचे भने मैले त्यही ५० वर्षको पुरुषलाई रोज्ने छु अन्तर्वार्तामा आलियाले भनिन् । १८ वर्षे युवासँग आफूले लामो समयमा विताउन नसक्ने आलियाको भनाइ छ । आलियाको यो भनाइबाट पुष्टी हुन्छ कि उनी परिपक्क मान्छे मन पराउछिन् ।
Newer Postसर्लाहीको महरानी बजारमा एक पेट्रोल पम्पमा लाखौंको लुटपाट
Older Postकुन रोगीले व्रत नबस्ने ? व्रतालु बेहोश भए यसो गरौं ।